Ahoana ny fomba hanombohana orinasa Dropshipping | Martech Zone
Ireo taona vitsivitsy lasa izay dia tena nampientanentana an'ireo mpandraharaha na orinasa mitady hanangana orinasa ecommerce. Folo taona lasa izay, nanangana sehatra ecommerce, mampiditra ny fanodinam-bolanao, manisa ny tahan'ny hetra eo an-toerana, fanjakana ary ny hetra nasionaly, manangana automatique marketing, mampiditra mpamatsy fandefasana entana, ary mitondra ny sehatry ny lozisialy anao hamindra ny vokatra iray amidy ka hatramin'ny andefasana dia naharitra am-bolana ary dolara ana hetsiny.
Ankehitriny, mandefa tranonkala amin'ny sehatra ecommerce toa Shopify or BigCommerce azo tanterahina mandritra ny ora fa tsy volana. Ny ankamaroany dia manana safidy fikarakarana fandoavam-bola ao anatiny. Ary ireo sehatra maodely ho an'ny varotra maoderina toa Klaviyo, Omnisend, na Moosend bolt mahitsy amin'ny tsy misy na inona na inona fa ny tsindry bokotra iray.
Inona no atao hoe Dropshipping?
Dropshipping dia maodely fandraharahana izay tsy tokony hitahiry na hikirakira tahiry akory ianao mpivarotra. Ny mpanjifa dia manafatra ny vokatra amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera ary mampitandrina ny mpamatsy anao ianao. Izy ireo indray no manamboatra, mametaka ary mandefa ny vokatra mivantana amin'ny mpanjifa.
Ny tsenan'ny dropshipping manerantany dia manodidina ny $ 150 miliara amin'ity taona ity ary tokony mihoatra ny telo heny ao anatin'ny 5 taona. 27% amin'ireo mpivarotra an-tranonkala no nifindra mba hampidina ny sambo ho fomba voalohany amin'ny fanatanterahana ny filaminana. Tsy lazaina intsony ny 34% ny varotra Amazon dia tontosa tamin'ny fampiasana dropshipper tao anatin'ny folo taona lasa!
Miaraka amin'ny sehatra dropshipping toa Pirinty, ohatra, afaka manomboka mamolavola sy mivarotra vokatra avy hatrany ianao. Tsy mila mitantana tahiry, na manahy momba ny famokarana… ny orinasanao mandao dia ny fitantanana sy ny fanatsarana ary ny fampiroboroboana ny vokatrao amin'ny Internet tsy misy fahasarotana hafa.
Website Builder Expert dia namoaka torolàlana vaovao momba ny infografika, Ahoana ny fomba hanombohana orinasa iray Dropshipping. Ny torolàlana infographic dia mampiasa ny statistika farany sy ny fikarohana mifototra amin'ny fahitana avy amin'ireo manam-pahaizana Dropshipping niresahanay. Ity no fonosiny:
Inona ny Dropshipping ary ny fomba fiasan'izy io
Ny antontan'isa farany momba ny vokany
Ny dingana 5 hanombohana orinasa Dropshipping
Fahadisoana mahazatra Dropshipping 3 tokony hialana
Angano mitete momba ny Dropshipping mahazatra
Ny tombontsoa lehibe ateraky ny Dropshipping
Mifarana amin'ny fanontaniany: Tokony hiala amin'ny asany ve ianao?
Fampahafantarana: Mampiasako ireo rohy ifandraisako amin'ireo sehatra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: dropshippinginfographic dropshippingantontan'isa dropshippingSary torohaywebsitebuilderexpert